Ireo ve no logo ratsy indrindra? | Famoronana an-tserasera
Inona no holazainao amiko raha manontany anao aho hoe inona ilay sary famantarana ratsy? Heveriko fa ny sary famantarana ratsy dia iray izay tsy mahavita manatanteraka ny asany amin'ny fomba mahomby. Tadidio fa ny lahasa lehibe indrindra dia ny fanomezana ny orinasa manana ny maha izy azy manokana sy ny soatoavina, rehefa misy ny fanodikodinana ireo soatoavina ireo ary avela hisokatra ny tendrony sasany, dia azo ny laza malaky loza.
Ireto misy tranga azo ampiharina momba izany. Raha nieritreritra ianao fa nahita izany rehetra izany, anio dia ho hitanao izany mbola nisy habibiana vaovao hita.
Mazava ho azy, ny mpamorona an'ity sary famantarana ity dia tsy nanao ny sarin'ny Eglizy Katolika na inona na inona tian'izy ireo tamin'izy namolavola azy tamin'ny taona 1973 ho an'ny Kaomisiona ho an'ny tanora Archdiocesan. Ny tanjon'izy ireo dia ny hanehoana hafatra mahafinaritra (araka ny fijerinao azy tsara), satria nanandrana namorona fifamatorana teo amin'ny fiangonana sy ny zandriny indrindra izy. Saingy, matotra? Tsy nisy làlana hafa afa-tsy ny vatam-patin'ny pretranay ihany? Raha ny lojika dia nisy fiatraikany lehibe io ary dia nanakoako nanerana an'izao tontolo izao.
Klasika eo amin'ireo logo mampiady hevitra indrindra. Ity marika akanjo ity dia nampiasa sora-baventy nanampy faribolana roa izay nanome azy feo manome tolo-kevitra kokoa.
Ny paikadin'i Mont-Sat dia ny famoronana biby tia olona sy mahay miombom-pihetseham-po, saingy nanjary nazava indray ny vatofantsika. Ny zavatra hafahafa amin'ny rehetra dia ny mitazona antena nentim-paharazana ... Fa maninona?
Tanora roa no mandihy amin-kery eo imasontsika eo ambanin'ny fifohazana izay mamela typografika tsy takatra ary mitaky ezaka fanampiny avy amintsika mba hahafahany mamaky ireo teny efatra. Rehefa avy nandany iray minitra nanandramana namoaka ilay hafatra miafina dia nahita fatin-jaza mitanjaka izahay. Averina indray?
Sary famantarana tsy manan-tsiny sy iraisana. Ary tsy fanavotana izany, fa raha ny tenany dia tsy hisongadina ... Raha tsy manapa-kevitra ny hamaky azy io isika. Avy eo dia niova tanteraka ny hafatra.
Nisafidy ny hisolo tena ny marika misy azy ireo ny Hasc Center miaraka amina fiarahabana fatratra eo amin'ny olona roa. Sariaka loatra hoy ianao?
Sary famantarana somary hafahafa noho ny antony maro. Ny litera voalohany an'ny biraon'ny fahasalamana any Taiwan dia mifangaro miafina amin'ny endrik'olombelona, ​​ka nahatonga olona tsy salama na tsy salama. Ny litera eo afovoany, ahoana no mety ho izy raha tsy izany, dia manolotra tarehimarika mivoaka avy amin'ny mety ho valahany, raha ilay eo akaiky eo kosa manana lavarangana ... Averina indray sa izaho no manana endrika maloto?
Sary fongana minimalist, skatika ary kanto mihitsy aza. Saingy mitondra antsika amin'ny famakiana somary manelingelina indray izany. Hitondra ny zanakao any amin'ity mpitsabo zaza ity ve ianao? Tsy izany mihitsy.
Mampidi-doza ny dikany roa, ity no porofo maharesy lahatra: Ny masoandro milentika tsara tarehy dia mety hivadika herintaona tampoka. Raha ny marina dia herintaona no nahitako voalohany, avy eo nijanona aho hijery azy ary hitako fa fananganana maritrano tokoa amin'ny filentehan'ny masoandro io.
Ny akoho iray dia tonga nofo tamin'ny alàlan'ny fanamafisana ny litera D sy B. Ny anaran'ny marika, Vorona Maloto (vorona maloto). Milamina ny fandraisan-kevitra, saingy mazava fa misy ny famakiana faharoa, misy sary ary vetaveta.
Ity misy iray amin'ny vokatr'ilay sary famantarana A-Style. Vokatry ny famoahana azy dia nisy logo maro nanomboka niseho ary koa ireo izay tsy maniry ilay zavatra izay misy dikany indroa manampy hevitra tsy ilaina amin'ny sora-baventy.
Ity mpivarotra mofo ity dia sahy nanisy sary famantarana nanome azy laza tsy nampoizina. Na dia orinasam-pianakaviana mahazatra aza izy io, ny sarin'ny orinasa dia mety hahatonga antsika hieritreritra zavatra hafa be.
Ilaina ve ny manao karazana fanamarihana? Ny dikany roa dia mazava kokoa noho ity ampahany ity.
Mety hamitaka ny mifanindry. Indraindray dia ilaina ny mitahiry toerana sy mampidina ny endritsika rehetra amin'ny faritra voafetra. Amin'ity tranga ity dia hetsika be herim-po io ary angamba nahatonga ny mpanjifa maro hangataka serivisy fanampiny. (?)
Ny Kids Exchange dia mety ho tonga fanovana zazakely haingana, ity ny porofo. Kerning dia zavatra iray, sa tsy izany?
Toa mahazatra ve izany? Tena mitovy amin'ny tranga DirtyBird izy io, saingy amin'ity tranga ity, ny litera d sy b dia satroboninahitry ny marika (tsy ilaina mihitsy io fomba io ary heveriko fa napetraka miaraka amin'ny fikasana hanasongadinana izany famakiana indroa miaraka amin'ny atiny ara-nofo izany. ).
Ny fohy tamin'ny 1917 dia nilaza hoe: tianay ny hisolo tena ny orinasanay amin'ny alàlanay amin'ny alàlan'ny karazana mpanjifa tadiavinay; lehilahy, 40-50 taona, kanto tia saosisy. Tsy hita eto amin'ity lisitra ity ny sary famantarana ara-bakiteny kokoa. Ny zavatra hafahafa indrindra dia rehefa afaka 100 taona lasa dia tsy nisy naniry ny hanova azy.
Olana kerning iray hafa, mitarika olana amin'ny famakiana. Ny tompon'ity magazay ity dia ho nahavonjy aretin'andoha kely tamin'ny fanidinana toerana vitsivitsy monja teo anelanelan'ny L sy I.
Nangataka sary famantarana ireo dokotera ireo izay mampiseho mazava fa afaka manamboatra na inona na inona izy ireo ary taorian'ny fanitsiana maromaro dia nanapa-kevitra ny hitazona an'ity izy ireo. Toa manamboatra olana amin'ny taovam-pananahana lahy ihany koa izy ireo.
Ity sary famantarana ity dia toa nataon'ny mpamorona iray tamin'ny photoshop tamin'ny taona 2000, angamba izy koa mpitia siansa izay tsy dia nahalala firy momba ny teôria loko.
Safidy typografika mety fa tsy fampiasana loko. Ity logo ity dia mety ho sary famantarana tsara raha tsy noho ny fahasimbana eo amin'ny maso.
Azo antoka fa tsy noheverin'ilay mpamorona ity logo ity fa ny vehivavy mitanjaka manana lelafo eo ambaniny dia mety ho toa nanamaivana ny tenany. Azo antoka fa tsy tsikaritr'ilay mpanjifa izany rehefa nankato azy io ary izany no antony anisany an'io lisitra io ankehitriny.
Toa mampidi-doza ity akaninjaza ity eo am-pidirana. Ankizy roa atambatry ny tafon'ny trano na zavatra mitovy amin'izany, manao azy ho mampatahotra kely, saingy ny kolontsaina tatsinanana dia tena hafa amin'ny antsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ireo ve no logo ratsy indrindra?
change68berto dia hoy izy:
Compilation tsara re izany!
Mamaly an'i chango68berto
JOSE LUIS GIORDANO dia hoy izy:
Hatramin'ny 2002, tany Espaina ny rafi-pahasalamam-panjakana dia nantsoina hoe National Health Institute, izany no antony nanoratana ny "INSALUD" (TSY Fahasalamana) na aiza na aiza. Manao ahoana ianao? Noho izany, tsy ny Logos ihany no voafantina ratsy.
Valiny an'i JOSE LUIS GIORDANO